आफ्नै साइलो बुबाबाट बम्बाईको कोठीमा बेचिएकी सुनिता रुदै भन्छिन:म सुत्केरीलाइ पनि छाडेनन् पापीहरुले – Khabar Silo
एक पटक एउटा अनौंठो घटना भयो । सायद कोठीहरुमा अपवादका रुपमा हुने घटना । एकपटक हाम्रो बंगलामा मोजमस्तीका लागि कलेजका केही केटाहरु आएका थिए । ती केटाहरु आ आफुले मन पराएका केटीहरु बोकेर कोठामा गए । ती मध्येकै एउटा केटाले मलाई राज्यो र मेरो कोठामा आयो । त्यती बेला म कलिलै थिएँ । भर्खर बच्चा जन्मिएकाले मेरो स्तनबाट दुधका धारा चुहिरहेको थियो । निपल अलिकति निचोर्दा नै दुध चुहिन्थ्यो ।
कलेजको त्यो भर्खरको केटाले छातीमा त्यसरी दुध बगेको देखे । उ निकै आश्चर्य चकित भयो र उसले भन्यो, ‘मलाई तिमिसंग अरु केही गर्नु छैन । बस मलाई यो दुध खान देऊ ।’ ‘के नचाहिदो कुरार गर्छौ ! ?’बरबराउँदै भनें, ‘क्या ! खुस्केटहरु आउँछन्
‘मलाई यहाँ यस्तो काम हुन्छ भन्ने पहिला थाहा थिएन । म त केटाहरुको लहलहैमा लागेर आएको । यहाँ आएपछि तपाईलाई भेट्दा मैले आमालाई भेटेजस्तो लाग्यो । मैले आजसम्म आमाको दुध खान पाएको थिइन, त्यसैले तपाईलाई आमा बनाउन चाहेको हुँ, उसले भावुक हुँदै भन्यो ।
उसको कुरा सुनिसकेपछि म पनि अलि भावुक भएँ । यदि कसैले मलाई ‘आमा’ सम्वोधन गरेर स्तनपानको याचना गरिरहेको छ भने त्यस्तो बेला के गर्ने ? म केही पल अलमलमा परेकी थिएँ । आखिर मलाई लाग्यो, जव उसले मलाई आमा नै भनिसकेको छ भने उसलाई छोरा मानेर स्तनपान गराउन केको आपत्ति ?
बाँकी भिडियो हेरौ
कुनै पनि व्यक्तिको जन्म सात बार मध्ये एक दिन हुने गर्छ। हरेकको जन्म बार र समयबाट जन्मकुण्डली बनाउने वा भविष्यवाणी गर्ने गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आफू जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभर रहने गर्छ। आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको हुन्छ भने बुधवार बुधको प्रभाव रहने गर्छ । विहीबार […]
हामी बस्ने पृथ्वी कुनै कालखण्डमा आगोको भट्टीजस्तो तातो थियो। इँटा बनाउने भट्टीको कल्पना गर्नुस् न, त्योभन्दा कता हो कता तातो! त्यस्तो आगोको रापभित्र कुनै पनि जीवजन्तु बाँच्ने कुरै आएन। जीवजन्तु र वनस्पतिहरूले त्यति बेला मात्र सास फेर्न थाले, जब पृथ्वीको राप सेलाउँदै गयो, आगोको भट्टी चिस्सिँदै गयो। पृथ्वी सेलाउने यो प्रक्रिया लगभग ४७ करोड वर्षअघि […]